Izindaba - Umbukiso
Inkampani yamakhandlela kaWinby iyinkampani esezingeni eliphakeme yokukhiqiza amakhandlela anamakha, izimbiza zamakhandlela, ikhandlela lensika nekhandlela lobuciko. Sihlanganyele eCanton Fair iminyaka eminingi, futhi saheha amakhasimende amaningi futhi avela emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Kuze kube manje, sisalondoloza ubuhlobo obuhlala isikhathi eside bokusebenzisana ngenxa yekhwalithi yethu ephezulu, amanani entengo yokuncintisana kanye nensizakalo ehamba phambili. Abathengi abaningi basinikeze ukuhlolwa okuphezulu kwemikhiqizo yethu.
E-Canton Fair, inkampani yethu ihehe abathandi bamakhandlela abaningi abavela emhlabeni wonke, futhi banesithakazelo esikhulu kumakhandlela ethu engilazi anephunga elimnandi. Sinikezela ngamakhandlela ezinhlobonhlobo zezinkomishi, kufaka phakathi inkomishi yengilazi yensika, isitayela seYankee, inkomishi eyisikwele, imbiza yethini, imbiza yokugcina. Futhi namakhandlela amaningi obuciko. Vele, futhi banentshisekelo enkulu kumasevisi wethu enziwe ngezifiso, ngoba bangaphrinta imibhalo abayithandayo noma izithombe kumakhandlela abawathandayo.
Ngenxa yekhwalithi yethu yomkhiqizo kanye nensizakalo yamakhasimende, siphumelele ukuthandwa ngamakhasimende amaningi eCanton Fair. Isibonelo, elinye lamakhasimende ethu lisithumelele i-imeyili: Ngithanda ukusebenzisana nawe. Isevisi yakho ingenye yezinto ezihamba phambili engake ngahlangana nazo. Ngenxa yensizakalo yakho enhle kakhulu, akukho lutho ongakhathazeka ngalo. Ngibona kakhulu.
Okunye ukuphawula okuhle, elinye lamakhasimende ethu avela e-UK lisithumelele i-imeyili: Ngifuna kakhulu ukusebenzisa inkampani yakho njengoba ngazi kahle ukuthi usuzenzele amasekhondi ethu amabili mahhala. Ngenxa yalokho, siyakujabulela ukukhokha ukuze siqiniseke ukuthi imikhiqizo yethu yenziwe ibe sezingeni eliphakeme kakhulu futhi ilungele ukumakethwa ngokushesha okukhulu.
Ikhasimende laseJapan lithe: Amakhandlela wezinyosi ezinekhwalithi enhle. Kupakishwe ngokucophelela futhi kwalethwa ngesikhathi. Isevisi ibishesha futhi inobungani. Nginga-oda futhi.
Nazi ezinye izithombe namakhasimende ethu ongazisebenzisa.